ဝါဂွမ်းမီးစာနှင့် paraffine ဖယောင်းဖယောင်းတိုင် - တရုတ် Litbright ဖယောင်းတိုင် (shijiazhuang)
အခြေခံပညာအင်ဖိုမော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: G75-0450H အမျိုးအစား: Tapered ပစ္စည်း: Paraffin ဖယောင်းရုပ်အသုံးပြုမှု: စျာပနအခမ်းအနား, အားလပ်ရက်, SPA ကုမ္ပဏီ, ဘာသာရေး, မင်္ဂလာဆောင်, ပါတီ, မွေးနေ့, ပင်မစာမျက်နှာ Lighting, Decoration အမည်: Lighting အရောင်: White ကအရသာ: ရှိကြသည်အရွယ်အစား:7* 10cm အချိန်ကိုမီးရှို့: 8H ထုတ်ယူခြင်း: စက်အမျိုးမျိုး Size: ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနောက်ထပ်အင်ဖိုထုပ်ပိုး: Productivity ထုတ်ပိုးသေတ္တာများ: တစ်နေ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှုန်းတန်ချိန် 30: Litbright သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: သမုဒ်ဒရာ, မြေ, မူလအစ၏လေကြောင်း Place: တရုတ်ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း:3× 20 '' fcl လက်မှတ်: အီး BSCI oU ...
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: G75-0450H
ကွဲပြားခြားနားသော Size: ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး
productivity: တစ်နေ့လျှင်တန်ချိန် 30
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း:3× 20 '' fcl
လက်မှတ်: အီး BSCI
ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများထဲမှအခြား 70% paraffin ဖယောင်းများနှင့် 30% ဆီအုန်းဖြစ်ပါသည် 100% Paraffin ဖယောင်းရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်လက်ကားအဖြူရောင်မဏ္ဏိုင်ဖယောင်းတိုင်, အလှဆင်ဘို့ Multi-အရောင်အိမ်ထောင်စုဖယောင်းတိုင်အဖြူ, တောက်ပဖယောင်းတိုင်, Multi-အရောင်တောက်ပဖယောင်းတိုင်အဖြူ, Flute ဖယောင်းတိုင်, Multi-အရောင် Flute ဖယောင်းတိုင်အဖြူ, taper ဖယောင်းတိုင်, Multi-အရောင် taper ဖယောင်းတိုင်များပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖယောင်းတိုင်, အကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဤပစ္စည်းများကိုကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းများဖြစ်ကြောင်း, ဖောက်သည်များအကြားရေပန်းစားနေသောနေကြသည်။
Litbright ဖယောင်းတိုင်စက်ရုံနောက်ဆုံးရာစုကိုးဆယ်အတွင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တရုတ်ပြည်မကြီးအတွက်စက်ရုံနဲ့ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကျနော်တို့ဖယောင်းတိုင်တင်ပို့၏ 10 နှစျကျြောရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံဧရိယာအကြောင်းကို 48,000 စတုရန်းမီတာနှင့်ကျွန်တော် Hebei အတွက်အကြီးမားဆုံးဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ 800skilled ကျော်လုပ်သားများနှင့် 40 ပညာရှင်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်:4× 20 '' ကွန်တိန်နာ / နေ့။ ဤပစ္စည်းများကိုကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်ဖောက်သည်များအကြားအလွန်ရေပန်းစားနေသောအဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းများ၏ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ထက်ပိုမိုရှစ်ဆယ်နိုင်ငံများစသည်တို့, အမေရိက, ဥရောပ, အာဖရိကနှင့်သြစတြေးလျမှတင်ပို့ခဲ့ကြသည်။
တိုင်းချွတ်ယွင်းကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုပြဿနာ (transporation စဉ်အတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှတပါး) နောနိုင်ရန်အတွက်အစားထိုးရန်နိုင်ပါသည်။